Earthing iwe pachako: Unozviita sei izvozvo? [Mazano gumi nematanhatu ekugadzirisa] - Kunamata
bhatani repamba uye yekubata id isiri kushanda
iphone yekubata bhatani isiri kushanda
sei kudzima maalbum iphone
Unogona sei iwe pachako grounding ? Mune mamwe mazwi: chii chiri pasi uye ungazviite sei izvi? Unogona kuwana dzakanaka pano kudzidzira kurovedza muviri uye kufungisisa kwevhu. Verenga zvimwe…
Ndinofanira sei ivhu? Zvese zviitwa uye matipi ...
Pazasi iwe unowana iwo maekisesaizi, kufungisisa uye matipi ekuzviisa pasi pachako.
Zano 1 - Inzwa, fema nemuromo wakashama, vhura uye wopedzisira wave munyoro…
Ndiri kukukoka iwe mukurovedza muviri na rusununguko . Zvinova zvakakwana kusagadzikana . Icho chiri pamusoro pekufema kwakadzika uye kufamba kwepasipo. Pasi nekuvapo. Tiri kudzokera kwatiri muviri , inova rwendo rwakaoma. Haisi mhosva yako kuti izvi zvinonetsa: zvinodzidziswa kwatiri.
Iko kukoka kunotevera: iko kuri pachena, kukokwa kwechokwadi kubva kwandiri. Toenda manzwiro kuunza, pamwe kusuruvara, pamwe kudzvinyirirwa mufaro, pamwe hasha. Kana isinganzwi kusununguka, kana kana iwe usiri kuda kuve unobatanidzwa zvizere, iwe zvakare une sarudzo yekusaita chiitwa ichi. Chiitwa chinotevera:
>> Kufema mukati makumi mashanu nguva ne shama muromo mukati nekunze - zvakakwana. Ndiri kuda kunzwa kurira kwemweya wekufema. Vhura huro yako zvachose. Panogona kuve negag reflex, asi hazvina basa. Vhura huro yako wozorodza mhasuru dziri muhuro mako.
Pano iwe unogona kuverenga zvakawanda nezve bioenergetics uye kushingaira kufungisisa.
Zano 2 - Inzwa kuti unotakurwa sei nepasi
Nguva dzese iwe paunonzwa kuti unoda imwe ivhu, iwe unongotarisisa kutarisisa kwako netsoka dzako uye nekuziva matambiro epasi. Izvi zvinoita kuti iwe ugare pasi uye hazvigoneke kugara mumusoro wako.
Zano 3 - Gadzira hunhu hunhu hwechinhu chePasi
Funga hunhu hwechinhu chepasi:
Pasi vanhu kudzikama U.S.
Kana iwe ukawana chimwe chinhu chinonakidza, ivo vanogara vari ivo vanoti: 'Gara pasi.'
Earthing ndeiyi: iwe simba rakaderera kuwana. Simba ndipo paunotarisa.
Mamwe mazwi akakosha ehunhu hwepasi vanhu:
Ipa basa rechikoro.
Kufambira mberi mumatanho.
Rumwe ruzivo nezve izvo zvinhu zvina zvinogona kuwanikwa pano.
Zano 4 - 15 - Kutaurirana neMweya mweya (Amai Pasi: Gaia)
Miviri yedu yenyama inodya pasi. Aya ndiwo maratidziro aunoita nemweya yepasi:
Ingofamba famba kunze. Buda uye unoteerera kune nyika yakakukomberedza.
Famba usina shangu.
Inzwa mweya wemuti.
Rara pahuswa uye unzwe pasi kufema.
Inzwa kazhinji kuti unotakurwa sei nevhu: bata pasi.
Kumbira izvi mumunamato wako.
Aya ndiwo mashandiro auri kuita pamwe nemweya yepasi!
Zano 16 - Dzimwe nzira dzekudzika pasi
Uyezve tarisa mabhuku anotevera nezve kuzviisa pasi pachako:
Pamusoro penzira dziri pamusoro, pane nzira dzinoverengeka dzekuzvimisikidza pachako
Kudya chikafu chevhu…
ZVINOZIVISWA NEZVENYU RUZHINJI RWAKO PAMUSORO PAKO
Kungwarira pabasa: ndiwo mashandisiro aunozviita [7…
Izvi Zvinorevei Kana Iyo Ladybug Yakagara Pauri?
Chii Chinoitika Pamweya Paunorara Nemumwe Munhu?